Weerarkii Laanta-Buuro Fariin Ceynkee ah buu u dirayaa DF-ka iyo Beesha Caalamka? W/D Warfaa Kheyrdoon.
Tuesday July 12, 2016 - 08:50:45 in Wararka
Weerarkii Xooganaa ee shalay aroortii hore ka dhacay deegaanka Laanta-Buuro ee duleedka degmada Afgooye laguna dilay tobaneeyo Askari ayaa farriin cad u diraya dhammaan cadawga Xarakada Al Shabaab.
Ciidanka DF-ka ayaa Soomaaliya looga yaqaan Calala-uus ama Marya calas
Howlgalkii Laanta-Buuro Al Shabaab waxay kula wareegtay saanada hub ah iyo gaadiid dagaal oo DF-ka ku qalabaysay ciidankeeda.
Laanta-Buuro oo qiyaastii 40 KM ujirta Magaalada Muqdisho qabsashadeeda waa ay soo noq noqotay, sedax bilood ka hor weerar midkaan ka xoog badnaa kana khasaara badnaa ayay ciidamada Xarakada Al Shabaab ku qaadday isla saldhiggaLaanta-Buuro.
Marka laysku daro gaadiidka dagaalka ee Al Shabaab ku qabsatay weeraradii Laanta waxay gaarayaan 16 gaari oo kuwa Tiknikada iyo xamuulka ah.
Dhimashada labada howlgal waxay ka badantahay 104 Askari waxaa sii dheer Keydadkii hubka ciidanka Dowladda oo si buuxda ugu gacan galay Shabaabul Mujaahidiin.
Farriinta 1-aad ee Weerarkii Laanta-Buuro uu dirayo ayaa ah "Majiraan Ciidan DF-ka ay leedahay oo ubabac dhigi kara Awoodda Al Shabaab”.
Ururka Midowga Afrika ayaa isbuucii lasoo dhaafay si rasmi ah ugu dhawaaqay in sanadda 2018-ka ay soo gaba gabayn doonaan duullaankooda Soomaaliya islamarkaana sanadda 2020-ka ay gebi ahaan ciidanka AMISOM ka baxayaan ciidda Soomaaliya.
Warka kasoo baxay Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in ammaanka Soomaaliya lagu wareejin doono ciidamo Soomaali ah oo taabacsan Dowladda Federaalka, "Marka ay ciidanka AMISOM baxaan soomaaliya waxaa magaalooyinka waaweyn la wareegi doona ciidanka qaranka Soomaaliyeed”ayaa lagu yiri warka kasoo baxay AU.
Xaqiiqda ayaa ah in waxa loogu yeero beesha Caalamka aysan Soomaaliya la rabin wax wanaag ah, gumeystayaasha Itoobiya iyo Kenya marabaan dhismaha dowlad soomaaliyeed oo awood leh Burundi iyo Uganda iyana waxay maanka ku hayaan oo ay jecelyihiin in qaab calooshood u shaqeystanimo ah usii joogaan soomaaliya si ay lacago ugasii helaan Q.Midoobe!.
Inkastoo kumanaan ciidamo Itoobiyaan iyo Kenyaan ah ay magaca dalka ku joogaan kaalmeynta dowladda Federaalka hadane soo duulayaashu marnaba ma doonayaan in ay dhisaan ciidan Soomaali ah oo taya leh sabab ah iyagoo ka baqaya in ciidankaas uu iyaga kusoo jeesto tijaabadaas oo ay arkeen sanaddii 1977 xiligaasi oo ciidankii soomaaliya cagta mariyay Itoobiya.
Fariinta 2-aad ee Weerarka Laanta-Buuro waxay ku socotaa dowladaha Imaaraadka Carabta,Turkiga iyo Ururka Midowga Yurub oo kumanaan maleeshiyaad ah usoo tababaray DF-ka si ay ula dagaallamaan Al Shabaab.
Lacago Malaayiin dollar ah ayaa ‘Beesha Caalamka’ looga cunay tababaridda ciidanka Somalia sidaasi oo ay tahay majirto magaalo si buuxda ay ciidamada DF-ka kaligood umaamulaan marka laga reebo xaafado katirsan magaalada Muqdisho oo haweenka iyo dhalinyarada ay kasoo raafaan.
Madaxda DF-ka waxaa ilaaliya ciidamo shisheeye waana dowladda kaliya ee caalamka Boolis iyo Melleteri ay u yihiin ciidamo Ajaanib ah.
Weerarkii Laanta-Buuro iyo kuwa kale waxay muujinayaan habacsanaanta awoodda DF-ka iyo in shisheeye ku tiirsanaan uusan waxba usoo kordhinayn madaxda Villa Somalia ee ku caanbaxay adeegsiga beenta iyo dacaayadda.
Laba Maalmood ka hor Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Xasan Sheekh ayaa lagu sheegay "in ciidanka geesiyaasha qaranka ay howlgal ku burburiyeen saldhig ay Al Shabaab ku lahaayeen deegaanka Goobaalle ee Shabeellaha Hoose"!!.
Geesiyaasha la sheegay in ay Howlgal u tageen Goobaalle maxay uga hortagi waayeen weerarkii Laanta-Buuro islamarkaana ay u difaacan waayeen Magaalada Marka ee xarunta Sh/Hoose.
Soomaalidu waxay ku Halqabsataa "Doqon Dibir kama daasho", Xasan Sheekh iyo Maamulkiisa ka daali maayaan faafinta dacaayad Rakhiis ah iyo ugacma hoorsiga dowlado shisheeye sida Itoobiya iyo Kenya oo ah cadawga Soomaaliya.
Al Shabaab iyana ka daali maayaan weeraridda Saldhigyada ciidamada Shisheeye iyo Kuwa Dowladda Federaalka, sidaas ayayna dhinacyadu u loolami doonaan inta dalka soomaaliya gumeysiga kujiro.
'Beesha Caalamka' Oo Aqbashay Musharraxnimada Mukhtaar Rooboow.